Sandesh Prabhahमनै छुने लेख :उसलाई चाहेर पनि भुल्न सक्दैन म Sandesh Prabhah
मनै छुने लेख :उसलाई चाहेर पनि भुल्न सक्दैन म
बिहीबार १९ चैत्र, २०७७
उसलाई मैले कुनै दिन मेरी नै हुनेछौं भनेर सोच्ने गर्थे । मन मनै मन पराउथे । उसलाई जीवन भर आफै संग बसाउनका लागि आफ्नै मनमा कल्पनाको एउटा सिंहदरबार बनाएको थिए । तर एउटा आँधीबेरीले त्यो सिंहदरबार उडाएर लग्यो ।
जीवनमा सबै सोचेका कुरा कहाँ पूरा हुदा रहेछन् । आज म संग केही चिजको अभाव छैन , छ त केवल उसको मात्र छ । उसको अभाव सडकका हरेक गल्ली-गल्लीमा र घुम्ती-घम्तीमा भएको छ । उसको अभावले गर्दा मेरो खुट्टाहरु मलाई नै हिडाउन नसक्ने भएका छन् । मेरा हातहरुले मलाई नै प्रश्न गर्न थालेका छन् । कहाँ छ त्यो ?? जसले मलाई प्रत्येक समय समाति रहन्थी । म मेरा हातहरुलाई के भनेर उत्तर दिउ ?? छोडेर गई भन्यो भने आफै भित्तामा बझारीन्छन् । अब केही दिनमा आउछे भन्यो भने कहि नगरी मौन भएर बसी दिन्छन् । उ आएर मात्र त्यरो काम गर्छु भन्छन् । आफ्नै हातहरुलाई सम्हान नसक्ने भएको छु ।
उसलाई मैले चाहेर पनि भुल्न सकेको छैन्न । म चाहन्छु उसलाई बिर्सन तर भने जस्तो सजिलो छैन । मेरो मन र मस्तिष्कमा उसको नै तस्बिर कैद भएको छ । त्यो तस्बिरलाई मेटाउन चाहन्छु तर मेरो मस्तिष्कले मलाई नै धम्की दिन्छ भन्छ ,”तैले उसको तस्बिरलाई मेटाउनु भनेको आफुलाई आफुले नै मेटाउनु हो ।” भन्छ ,”कुनै बेला मलाई झुक्याएर उसको तस्बिरलाई मेटाउन सफल भैस भने त संग म बस्दैन् । जब त बाट म निस्किएर जानेछु तब त्यरो नाम समाजले पागलमा परिवर्तन गर्नेछन् । त्यतिबेला त पागल हुनेछस् । “
मान्छेहरूले भन्थे समय बलवान् हुन्छ , समय एकदिन परिवर्तन हुन्छ । भन्थे दिन सबैका आउछन् दुख पछि सुख र सुख पछि दुख अवस्य आउछ । सायद उसको प्रेमको घडीको सुइ नघुमेर होला प्रेम भन्ने चिज परिवर्तन नहुने । उसका दुखाइका यादहरू सुखमा परिवर्तन नहुने । उसको म प्रतिको घृणा मायामा परिवर्तन नहुने । मेरो रोदन हासोमा परिवर्तन नहुने । यदि उसको प्रेमको घडीको सुइ चलि हाल्यो भने पनि मिलनको हैन विछोडको चल्दो रहेछ । जो कहिले पनि परिवर्तन हुदैन ।
मैले उसलाई जत्तिको माया कसैलाई गरेको थिएन । सायद अब कसैलाई पनि गर्दैन होला । मलाई कहिलेकाही संका लाग्थ्यो उ मेरी हुदिन कि भनेर किनकि चुम्बकले ढुङ्गालाई आफु तिर तान्न सक्दैन । त्यो संका आज वास्तविकतामा परिवर्तन भएको छ । हुन त उसको कला र क्रन्ति मेरो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा थियो । दोष उसको हैन मेरो हो उसलाई आफु भन्दा बढी माया गर्नु । उसलाई मैले कति चोटि आफ्ना मनका भावनाहरु भने तर उसले मेरो भावनाहरुलाई बुझन नै चाहिन् । उसको मन जस्तो मेरो मन बनाउन सक्दैन मानौं फलामलाई सुन बनाउन सकिदैन ।
सोचिरहेछु उसंग कहिले पनि भेट नहोस् किनकि उसलाई देख्नासाथ मेरा नयनले मलाई नै नसोधी उसलाई नै एकटक हेरि दिन्छन् । मेरा नयनहरुले आफु परेलि बनी उसलाई नयन बनाइ दिन्छन् । उसले देखाएका कल्पनाका लहरहरु र सपनाहरु बिम्ब बनी दिन्छन् ।
थाहा छैन किन उसले मलाई चिहान सम्म पुग्न नदि आधि बाटोमा नै जलाएर गई । भगवान संग कामना गर्छु उसलाई जिन्दगी भर सधैं खुसी मिलोस । उसको प्रेमिले मलाई जस्तै उसलाई धोका नदिवस । उसलाई मेरो तर्फबाट रंगिन शुभकामना । गल्ती मेरै हो उसलाई आफु भन्दा बढी माया गर्नु ।
पोष्ट अवलोकन : 200